Hihaona amin'ny Apple Music vaovao | Avy amin'ny mac aho
Araka ny efa nampahatsiahivinay anao indroa androany, dia ora vitsivitsy miala amin'ny fanombohan'ny Keynote voalohany an'ny WWDC 2015. A Keynote izay antenaina hanoloran'i Apple, ankoatry ny zavatra hafa, ireo s vaovaoserivisy fandefasana mozika, ny Apple Music.
Tadidio fa hatramin'ny nividianan'ny Apple ny orinasa Beats dia namolavola serivisy fandefasana mozika vaovao mifototra amin'ny Beats Music, ilay serivisy fandefasana mozika noforonin'i Beats taloha kelin'izay ary nahomby.
Betsaka ny tsaho fa na dia tsy nanidy tanteraka ny fifanarahana tamin'ireo orinasa firaketana aza i Apple, rahampitso no andro voafidy hanolotra ny serivisy Apple Music vaovao eo amin'ny fiarahamonina. Izahay no manome izany anarana izany satria raha raisina ny lalana narahin'izy ireo tamin'ny Apple Pay na Apple Watch, tena azo inoana fa te hanaraka ny laharana izy ireo ary miantso an'ity serivisy vaovao Apple Music ity.
Raha ny momba ireo fivoahana vitsivitsy azontsika antenaina dia hanana serivisy mivantana amin'ny mozika mitovy amin'ilay omen'ny marika toy ny Spotify na Pandora isika nefa miaraka amin'ilay toetra tsy misy kinova freemium izay, amin'ny vidin'ny maimaim-poana, dia ampidirina eo anelanelan'ny hira ny dokam-barotra. Amin'ny tranga Apple, dia hanomboka amin'ny kinova voaloa izay Mety ho $ 9,99 isam-bolana, ary afaka mankafy kinova maimaimpoana ianao mba hitsapana ny rafitra mandritra ny telo volana alohan'ny hifindranao amin'ny kinova aloa.
Ny mazava dia ny Apple dia te hanana rafi-pandefasana mozika vaovao amin'ny ezaka hamelomana indray ny iTunes, izay manomboka rahampitso, dia hanova ny anarany ary hatao hoe Apple Music, mitahiry ny anaran'ny iTunes amin'ny magazay an-tserasera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Hamoaka rahampitso ve ny Apple Music? Ianaro ny serivisy fandefasana mozika vaovao an'i Apple